Umvelaphi weLizwi 'lamaProthestani'
UmProtestanti ngumntu olandela enye yamasebe amaninzi amaProtestanti, uhlobo lobuKristu olwenziwe ngexesha lokuguqulwa kwekhulu leshumi elinesithandathu kunye nokusabalalisa lonke elaseYurophu nasemva kwehlabathi. Ngenxa yoko, igama elithi 'iProtestanti,' liye lasetyenziswa kwinqanaba leshumi elinesibhozo, kwaye ngokungafani nemimiselo yamandulo, unokukwazi ukuthetha oko kuthetha ntoni kunye nento encinane yokuqikelela: kukuthi, ngokucacileyo, konke 'ngokubhikisha.' Ukuba ngumProtestanti, ngokwenene, ukuba ngumprothestor.
Ngomnyaka we-1517, isazi semfundiso yenkolo uMartin Luther sathetha ngokumelene neSonto LaseLatini elisungulwe eYurophu ngokubhekiselele kwimimiselo ye- indulgences . Kwakukho abaninzi abagxeki beCawa yamaKatolika ngaphambili, kwaye abaninzi bebetyunjwe lula ngumbutho ophakathi kwe-monolithic. Abanye babetshiswe, kwaye uLuther wabhekana nesimo esibi ngokuqalisa imfazwe evulekile. Kodwa ininzi kwimibandela yecawa yacinga ukuba inkohlakalo yayinokukhula, kwaye xa uLuther ekhonkxa iintambo zakhe kwindlu yecawa (indlela eqinisekisiweyo yokuqala ingxoxo), wafumanisa ukuba unokufumana abaqeshisi abomeleleyo ngokwaneleyo ukukhusela.
Njengoko uPapa wagqiba kweyona ndlela engcono ngayo yokujongana noLuther, isazi semfundiso yenkolo kunye nabo basebenzisana nabo baqulunqa kakuhle uhlobo olutsha lwenkolo yobuKristu kwimiqulu emininzi yemibandela eyonwabileyo, eyayixhasayo, kwaye iya kuba yinguqulelo. Le fom entsha (okanye kunoko, iifom ezintsha) zithatyathwe yizikhulu nakwiidolophu zombuso waseJamani.
Ingxabano eyenziwe, kunye noPapa, uMlawuli, noorhulumente bamaKatolika kwelinye icala kunye namalungu ebandla elitsha kwelinye. Ngamanye amaxesha kwakubandakanya ingxoxo engokoqobo kwimveli yendabuko yabantu abemi, bethetha iimbono zabo, kwaye bavumela omnye umntu ukuba alandele, kwaye ngamanye amaxesha abandakanyeka ekupheleni kwezixhobo.
I ngxoxo ihlanganisa yonke iYurophu nangaphezulu.
Ngomhla we-1526, intlanganiso yeReichstag (ngokuqhelekileyo, ifomu yepalamente yase-German) yayikhuphe i-Recess ye-27 Agasti, ichaza ukuba urhulumente ngamnye ngaphakathi kolawulo anganquma ukuba yiyiphi inkolo ayefuna ukuyilandela. Bekungayi kuba yintlonelo yenkululeko yenkolo, ukuba yayikude. Nangona kunjalo, iReichstag entsha eyadibana ngo-1529 yayingenakulungeleka kumaLuthere, kwaye uMlawuli wayicima i-Recess. Ekuphenduleni, abalandeli becawa elitsha bakhupha i-'Protest ', ababhikisha ngokucinywa ko-Ephreli 19.
Nangona ukungafani kwimfundiso yabo, iidolophu zaseJamani ezisemzantsi zihambelane nomguquleli waseSwitzerland uZwingli wajoyina namanye amagunya aseJamani emva kokuba uLuther asayine kwi-'Protest 'njengenye. Ngaloo ndlela baziwa ngokuba ngamaProthestani, abo babhikishayo. Kuya kuba nobuninzi beenguqu ezihlukeneyo zengcamango eguqukileyo ngaphakathi kweProtestanti, kodwa eli gama linamathele kwiqela jikelele kunye nomxholo. ULuther, ngokumangalisa xa ucinga oko kwenzekayo ngabavukeli esikhathini esidlulileyo, wakwazi ukuphila kwaye aphumelele kunokuba abulawe, kwaye icawa lamaProtestanti lisungula ngokuqinileyo, lisho ukuba akukho zibonakaliso zokuphela. Nangona kunjalo, kwakukho iimfazwe kunye nokuchitha igazi eninzi kwinkqubo, kubandakanywa iMfazwe Yeminyaka Emashumi Amathathu ebizwa ngokuba yingozi kwiJamani njengemibhikano yekhulu lama-20.
70 Izizathu kunye ne-Islam
Imbali yeGalofu kwi-Olimpiki
Amacandelo okufundisa ukukhuthaza ukuBambisana kweManyano kunye nokuzibandakanya
Imizekelo yoBugcisa kunye neMicrosoft Description
Imiba yeGold Interesting 10
Ukuqonda iNcwadi yeZenzo
UDkt. Marvin Monroe Wafa nini?